Hoggaanka labada xisbi mucaarad ee UCID iyo WADDANI ayaa Sabtidii magaalada Hargeysa kulan kula qaatay Safiirka Midawga Yurub u qaabilsan Somaliland iyo Somalia Amb Nicolas Berlanga.
Sunday October 11, 2020 - 23:24:01
Hoggaanka labada xisbi mucaarad ee UCID iyo WADDANI ayaa Sabtidii (10-10-2020) magaalada Hargeysa kulan kula qaatay Safiirka Midawga Yurub u qaabilsan Somaliland iyo Somalia Amb Nicolas Berlanga.
Labada xisbi ee WADDANI Iyo UCID oo ay metelayeen guddoomiyaha xisbiga UCID Eng Faysal Cali Waraabe iyo guddoomiyaha ku meel gaadhka ah ee xisbiga WADDANI Mudane Xil Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo uu weheliyo xoghayaha gaarka ah ee guddoomiyaha xisbiga Md Cabdiqaadir Iidle waxa kulankan lagu lafo guray dardar gelinta arrimaha doorashooyinka isku sidkan ee Golaha Wakiillada iyo Goleyaasha Degaanka. Kulankan ayaa si gaar ah loogu falanqeeyay dhaqaalaha ku baxaya
doorashooyinka oo muhiim u ah qabsoomida doorashooyinka iyo sidii haweenka iyo dhallinyaradu doorkooda kaga beegan uga qaadan lahaayeen qabsoomida doorashada ugana qayb noqon lahaayeen goleyaasha la dooranayo.
Madaxda Labada xisbi ayaa Amb Berlanga la wadaagay sida ay uga go’an tahay qabsoomidda doorashooyinku, islamarkaana ay tixgelinayaan sidii dhallinyarada iyo haweenku door firfircoon uga qaadan lahaayeen doorashada iyo ka qayb galka siyaasadda.
27/10/2020 - 15:20:52
Hoggaanka sarre ee Xisbiga WADDANI oo maanta si weyn magaaladda hargeysa ugu soo dhaweeyey Guddoomiyaha goolaha dhexe ee Xisbiga WADDANI Mudane' Cismaan Af-gaab.
27/10/2020 - 09:42:38
Madaxda saddexda xisbi ee Somaliland WADDANI, UCID iyo Kulmiye iyo Sagaal ka mid ah wakiillada Beesha Caalamka ayaa kulan balaadhan ku yeeshay magaalada Hargeysa
22/10/2020 - 10:03:54
Guddoomiyaha Ku Meelgaadhka ah ee Xisbiga WADDANI Md Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo tacsi tiiraanyo leh u dirayaa qoyska, ehelada, iyo asxaabta ay ka baxday Alle ha u naxariistee Marxuumad Khadiija Xaaji Cismaan Mire oo ku geeriyootay Magaalada Hargeysa
20/10/2020 - 11:09:14
guddoomiyaha Xisbiga WADDANI ee dal weynaha Maraykanka Mudane Ibrahim Aadan Aw-Qoobey ayaa xalay casho sharaf ku maamusay Garabka haweenka heer qaran ee Xisbiga WADDANI
19/10/2020 - 19:22:15
Guddoomiyaha Ku Meelgaadhka ah ee Xisbiga WADDANI Md Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska, ehelada, waxgaradka, Ciidanka Booliska iyo Shacbiga JSL geerida ku timid Alle ha u naxariistee Marxuum Janaraal Cabdi Maxamed Saxardiid (Cabdi Dhiboo)
12/10/2020 - 12:41:36
Hoggaanka Sare ee Xisbiga WADDANI ayaa saaka ku qaabilay Xarunta Dhexe ee Xisbiga, Wafdi iyo Madax ka Socoto Xarunta nabadda, Dimuqraadiyadda iyo Xuquuqda Aadamaha ee Oslo Center
02/08/2020 - 19:38:54
Guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro oo tacsi tiiraanyo leh u dirayaa ehelka, qoyska iyo Qaraabada, uu ka geeriyooday Marxuum Axmed Cabdi Raygal.
22/07/2020 - 14:58:31
Shirki Xoghayayaasha Xisbiga WADDANI oo maanta ka qabsoomay xarunta dhexe ee Xisbiga WADDANI
© Xuquuqda website-kan waxa ay u gaar tahay Xisbiga WADDANI 2012 - 2020